AMFORA, MB ANTEKEO - အားလုံးကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်
AMFORA, MB ANTEKEO စီးပွားရေးကဒ်ကို
Christening လက်ဆောင်တွေကို, Crystal ဖန်ထည်, Dekor, Glass ကိုထုတ်ကုန်, Glassware +62 H. Manto g. 22
LT-92131, Klaipėda, လစ်သူ
ကုမ္ပဏီ code ကို: 303021255
Ss အာမခံ code ကို: 2207028
Link ကိုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကို į viršų Žemėlapis
į viršų လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား
Christening လက်ဆောင်တွေကို, Crystal ဖန်ထည်, Dekor, Glass ကိုထုတ်ကုန်, Glassware, Tableware မီးဖိုချောင်းသုံး, ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး, ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ်, ကျွမ်းကျင်မှု, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သုတေသန, ကြောကျရုပျ, ကြွေထုတ်ကုန်များ, ကြွေပန်းကန်, စက်မှုဝန်ကြီးဌာန, ထုတ်လုပ်မှု, စာရေးကိရိယာ, စီးပွားရေးလက်ဆောင်တွေကို, စုဆောင်း, ဒီဇိုင်နာများ, ဒီဇိုင်နာများအကျင့်ကိုကျင့်, ဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းခြင်း, ပညာရေး, သိပ္ပံ, ယဉ်ကျေးမှု, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒီဇိုင်း, ပန်းပွင့်, ပန်းအိုး, ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများ, ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း, ပြည်ထဲရေးပစ္စည်းများ, ပြည်ထဲရေးအကြံပြုချက်များ, ပြတိုက်, ပြပွဲစင်တာများ, ပြပွဲများနှင့်ဝိုင်း, ပြိုင်ပွဲများ, ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်များ, ဖန်းအိုး, မင်္ဂလာဆောင်သည့်လက်ဆောင်များ, မူလစာမျက်နှာအလှဆင်, မြေထည်, မြေထည်, ယဉ်ကျေးမှုအမွေအ, ရပ်တည်ချက်, ရယ်စရာလက်ဆောင်တွေကို, ရေချိုးခန်း, ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရွှံ့ထုတ်ကုန်များ, ရှေးဟောင်းတန်ဆာ, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, ရှေးဟောငျးဖွစျသော, လက်ဆောင်ပေးမယ်, လက်ဆောင်များ, လက်မှတ်, လက်မှတ်ပေးခြင်း, လက်မှုပညာသင်တန်းများ, လက်ရာလက်, လူ့လက်လက်ဆောင်တွေကို, သင်တန်းများ, သင်တန်း, သတ္တုရေယာဉ်များ, အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများက, အဆောက်အဦ, အနုပညာ၏အကျင့်, အနုပညာပြပွဲ, အပန်းဖြေ, အပန်းဖြေ, ဖျော်ဖြေရေး, အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်, အိမ်သူအိမ်သားကုန်ပစ္စည်းများ, အိမ်သူအိမ်သားကုန်ပစ္စည်းများ, အိမ်သူအိမ်သားကုန်ပစ္စည်းများ, အိုးခွက်, အိုးခွက် į viršų QR kodas
į viršų ဝက်ဘ်ဆိုက်
į viršų ဗမာတွင်ပုံစံတူကုမ္ပဏီတွေက
Vizitinekortele.ltVirtual စီးပွားရေးလုပ်ငန်း card ကို
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို virtual စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖနျတီးဖို့ register.ကိုယ်ကသာ3မိနစ်ကြာ !
Deutsch English Español Français Italiano Português Русский 中文 ဥရောပ Azərbaycanca Belarusian Català Čeština Dansk Eesti Gaeilge Hrvatski Íslenska Latina Latviski Lëtzebuergesch Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska Türkçe Ελληνικά български Српски Українська ქართული အခြားဘာသာစကားများ Afrikaans Asụsụ Igbo Bahasa Indonesia baṣa Jawa Basa Sunda Bisaya Chicheŵa Corsu Cymraeg Esperanto Euskara Fiteny Malagasy Frysk Gagana Sāmoa Gàidhlig Galego ʻŌlelo Hawaiʻi Kiswahili Kreyòl Ayisyen Kurdí lol Hmongb Sesotho Shona Shqiptar te Reo Māori Tiếng Việt Nam Wikang Filipino Xhosa Yorùbá Zulu Босански Қазақ Tілі Монгол Хэл тоҷики Հայերեն ייִדיש ייִדיש עברית اللغة الصومالية اللغة العربية اوزبیک پښتو حَوْسَ سنڌي فارسی قىرعىز ہندوستانی ማርኛ नेपाली पंजाबी मराठी हिन्दी বাংলা ગુજરાતી தமிழ் తెలుగు ಕನ್ನಡ සිංහල ภาษาไทย ພາສາ မြန်မာစာ ភាសាខ្មែរ 日本語 한국어 အားလုံးအမြို့မြို့ အားလုံးအမြို့မြို့
အစီရင်ခံစာတိကော်ပိုရိတ်ဒေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ !
© 2014-2016 www.vizitinekortele.lt - Virtual စီးပွားရေးလုပ်ငန်း card ကို.